Fizarana amin'ny Linux
Avy amin'ny Linux no bilaoginao ankehitriny izay hahitanao ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny Linux. Ho fanampin'izay, satria mety ho notsoahinao tamin'ny anarany io, dia hahita torolàlana, boky torolàlana ary torohevitra ihany koa ianao hahafahanao manatanteraka asa rehetra avy amin'ny Linux, izay hanampy anao hanadino ireo rafitra miasa hafa, indrindra raha "switch" ianao.
Satria nanapa-kevitra ny hiorina amin'ny Linux ny rafi-piasan'ny finday i Google, ity bilaogy ity koa dia manana fampahalalana mifandraika amin'ny tontolon'ny Android. Ny vaovao navoaka tao amin'ny From Linux koa dia manangona vaovao mifandraika amin'ireo olona malaza amin'ny Linux, izay miavaka amin'izany i Linus Torvalds, izay namorona, namolavola ary nitahiry ny voan'ny rafitra Linux tsirairay.
Anisan'ireo rindranasa resahina ato amin'ity bilaogy ity izahay manana famolavolana, fandaharana, fampiharana haino aman-jery na lalao mazava ho azy. Manana ny lisitry ny fizarana From Linux etsy ambany ianao. NY ekipa fanonta tompon'andraikitra amin'ny fitazonana sy fanavaozana azy ireo isan'andro.
Fisehoana / personalization
Tambajotra / seriver